Tranzit Go Inopetwa Simba Simba Wiricheya | Karman® Mawiricheya
Kana zvasvika kune mawiricheya emagetsi, imwe yenyaya hombe kukura kwechigaro uye huremu zvichiita kuti zvinetse kufamba. Karman Healthcare yawana mhinduro ne Tranzit Go Inopetwa Simba Simba Wiricheya. Iyi shanduko dhizaini inotora kubva pamakore makumi maviri nemashanu ekugadzira zvigadzirwa uye inoramba yakafanana ne Karman Utano hwakachengetwa zvakanyanya mhando dzemhando yepamusoro.
Yakagadzirwa kubva pane yakanakisa mbishi zvinhu, izvo zvinongedzo uko manyuko ekugadzira zvechokwadi iyo lightweight uye rinoshanda simba rezuva nezuva wiricheya. The Tranzit Go simba hwiricheya inorema mapaundi 46 chete uye zvinhu yakanakisa Li-Ion bhatiri. Zviri nyore kupeta, kutora, uye kuchengeta! Izvo zviyero zvaro zviri 39 "x 24" x 36 "uye 11" kana zvakapetwa. Iyo Tranzit Go yakagadzirirwa kuvandudza manyepo evashandisi pasi rose, saka izvozvi haugone kubvisa kushushikana parwendo ine chigaro chemagetsi.
Nenguva yekuchaja kwemaawa 6-8, chigaro che lithiamu-ion chigaro chine simba apo kusara kureruka uye inogona kubviswa zviri nyore kubva pachigaro kudurura imwe huremu. Pasina bhatiri, iyo wiricheya yemagetsi inorema mukati ingori makirogiramu makumi mana nemaviri. Yayo yakajairika yekutyaira iri mamaira gumi nemaviri, asi neyakaisarudzika Lithium-Ion Bhatiri, iwe unogona kuwedzera iyo yekutyaira renji kusvika 42 mamaira. Nebheteri rekuwedzera, chigaro chinorema-mukati pa12 mapaundi. Mawiricheya emagetsi pachivanhu inogona kurema kusvika mazana maviri emapaunzi!
The Karman Tranzit Go Simba Sachigaro rinogona kushandiswa mukati nekunze. Izvi wiricheya yemagetsi inokodzera zvese kongiri uye asphalt kuti ugone kuzviona zvinobatsira mune zuva nezuva upenyu. Izvo zvakanaka kune wese munhu kumazera ese. Nedanda rekubvisa, iwe haufanire kunetseka nezve kurudyi kana kuruboshwe ruoko. Iyo yakagadzirirwa 360 ° kufamba izvo zvinoita kuti zvive nyore kushanda.
Vatengi vari kuti izvi zvinotakurika wiricheya yemagetsi iri nyore uye iri nyore kushandisa! Vanhu vanogona kutenderera zvirinyore. Kuiisa mumotokari yako kunotora kushoma zvino! Chimwe chiitiko chakacherechedzwa ndeichi nyaradzo. Nechigaro chakapetwa uye chekumashure, iyo Tanzit Go Simba Sachigaro yakasungirirwa kunyaradzwa uye kufema!
Karman Healthcare's Tranzit Go Simba Sachigaro uye dhizaini yaro yakabva mukushaikwa kwe lightweight macheya emagetsi pamusika. Iko ikozvino inowanikwa pa Karman Healthcare ye $ 1,987 (yakajairwa mutengo wekutengesa i $ 3,899). Kuti udzidze zvakawanda nezve ichi Simba Sachigaro uye nezvose zvarinofanira kupa, shanya https://www.karmanhealthcare.com/product/tranzit-go/.
Ona Tranzit Go Simba Sachigaro muchiito pano: